Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 60
Copyright, 1915, avy amin'ny HW PERCIVAL.
Inona ny fitadidiana?
Ny fahatsiarovan-tena dia ny famokarana ny fahatsapana avy amin'ny toetra, toetra, na fahaizan-tsaina ao anatiny fa izay nanaovana fahatsapana. Ny fahatsiarovana dia tsy mamokatra lohahevitra na zavatra na hetsika. Ny fahatsiarovana dia mamerina ny fiheverana izay nataon'ny lohahevitra na zavatra na hetsika. Ny fizotrany rehetra ilaina amin'ny famoahana ny fiheverana dia tafiditra ao amin'ny teny fahatsiarovana.
Misy karazana fahatsiarovana efatra: fahatsiarovana fahatsiarovana, fahatsiarovana fahatsiarovana, fahatsiarovana hita maso, fahatsiarovana tsy manam-petra. Ny fahatsiarovana tsy manam-petra dia ny fahatsiarovan-tena amin'ny fanjakana rehetra sy ny zava-mitranga mandritra ny mandrakizay sy ny fotoana. Ny fitadidiana kosmika dia ny famerenana ny zava-mitranga rehetra eo amin'izao rehetra izao. Ny fitadidiana ny saina dia ny famerenana na fandinihana ny sain'ny fiovana izay nandalo hatramin'ny niandohany. Tsy misy tombony azo ampiharina azo avy amin'ny fitadiavana ny toetran'ny fahatsiarovana tsy manam-petra sy tsy fahatomombanana. Eto dia voatonona eto izy ireo ho fahatanterahany. Ny fitadidiana fahatsiarovana dia ny mamerina amin'ny alàlan'ny fahatsapana fahatsapana natao tamin'izy ireo.
Ny fahatsiarovana ampiasain'ny olona dia ny fahatsiarovana ny fahatsapana. Tsy nianatra nampiasa sy tsy mahalala ny telo hafa izy - ny fahatsiarovana fahatsiarovana, fahatsiarovana fahatsiarovana ary fahatsiarovana tsy manam-petra - satria ny sainy dia voaofana amin'ny fampiasana fahatsiarovana fotsiny. Ny fahatsiarovana lehibe dia nataon'ireo biby sy zavamaniry ary mineraly. Raha ampitahaina amin'ny olona, ​​mihena ny isan'ny saina miasa ao anaty zavamaniry sy zavamaniry ary mineraly. Ny fahatsiarovana ny olona dia mety antsoina hoe fahatsiarovana maha-olona. Misy baiko fito ny fahatsiarovana izay mitadidy ny fahatsiarovan'ny toetra feno. Misy fahatsapan-tsaina fito amin'ny toetra feno ny olombelona. Ireto fahatsiarovana fito ireto na baikon'ny fahatsiarovana ny maha-olona dia: fahatsiarovana maso, fahatsiarovana feo, fahatsiarovana tsiro, fahatsiarovana fofona, fahatsiarovana fahatsiarovana, fahatsiarovana ara-pitondrantena, "Izaho" na fahatsiarovana ny maha-izy anao. Ireo fahatsapana fito ireo dia mahaforona ny karazana fahatsiarovana iray an'ny olona amin'ny toetrany ankehitriny. Noho izany, ny fahatsiarovana ny maha-olona dia voafetra ho amin'ny fotoana izay ahatsiarovan'ny olona mahatsiaro ny fijeriny voalohany an'ity tontolo ity, amin'ny famerenana ireo fahatsapana natao tamin'ny fotoana talohan'ny fotoana ankehitriny. Ny fomba fanoratana ny fihetseham-po sy ny famerenana ireo fahatsapana voarakitra amin'ny alàlan'ny fahitana, feo, tsiro, fofona, fikasihana, fahatsapana ara-pitondran-tena sy ny "I", ary ny fizotran-tsofina sy fanelanelanana amin'izany mba hampisehoana ny antsipiriany ilaina ilaina ho "fahatsiarovana , ”Dia ho lava sy mandreraka. Saingy ny fanadihadiana dia azo raisina izay mahaliana ary manome fahatakarana ny fahatsiarovana ny maha-olona.
Ny zava-kanto sary dia mampiseho fahatsiarovana ny fahitana - ahoana ny fahatsapana avy amin'ny zavatra voarakitra sy voarakitra ary ny fomba namerenana ireo sary avy tao anaty firaketana. Fitaovana mpaka sary dia fampiharana mekanika momba ny fahatsapana fahitana ary ny fihetsika. Ny fahitana dia ny fandidiana ny mekanin'ny maso sy ny fifandraisany aminy, amin'ny firaketana an-tsoratra sy ny famerenana ireo fihetsika nambara ary nateraka tamin'ny hazavana. Amin'ny fakana sary ny zavatra iray, tsy hita ny lesy, ary mitodika mankany amin'ilay zavatra, ny apotraky ny diaphragm dia apetraka ho an'ny fanekena ny habetsaky ny hazavana, ny fifantohana kosa dia voafaritra amin'ny alàlan'ny halaviran'ny lefona avy amin'ilay zavatra alaina sary; ny fetran'ny fotoana hamoahana horonantsary — ilay sarimihetsika na takelaka manintona vonona handray ny fahatsapana ilay zavatra alohan'ny hamoahana azy - omena, ary raisina ny fahatsapana, ny sary. Ny fanokafana ny hodi-maso dia mamaha ny mason-tsina mivoaka; ny iris, na diaphragm am-bava, dia mampifanaraka ho azy ny hafahafa na tsy fisian'ny fahazavana; ny halehiben'ny maso dia mihitatra na fifanarahana mifantoka amin'ny tsipika fijerin'ny zavatra akaiky na lavitra; ary ny zavatra hita, ny sary dia nalaina tamin'ny fahitana, raha ny fifantohana kosa no nitazona.
Ny fizotran'ny fahitana sy ny sary dia mitovy. Raha mihetsika ilay zavatra na raha mihetsika ny lens na miova ny fifantohana dia hisy sary manjavozavo. Ny fahatsapana fahitana dia tsy iray amin'ireo fitaovana mekanika amin'ny mason'ny maso. Ny fahatsapana fahitana dia zavatra miavaka, miavaka amin'ny fomba fiasan'ny maso fotsiny satria ny takelaka na ny sarimihetsika dia lavitra ny fakantsary. Izany no hevitry ny fahitana, miavaka amin'ny ifandraisany amin'ny fiasan'ny maso, izay mirakitra ny fahatsapana na ny sarin'ireo zavatra voaray amin'ny alàlan'ny fitaovana mekanika an'ny maso.
Ny fahitana dia ny fandraisana ireo firaketana izay azo averina amin'ny fahatsiarovana ny fahitana. Ny fitadidiana ny maso dia misy amin'ny manipy na ny fanaovana pirinty ny sarin'ny fahitana ilay sary na ny fahatsapana izay voarakitra sy napetraky ny fahatsapana fahitana amin'ny fotoana hahitana ilay zavatra naverina. Ity dingana ity fahatsiarovana fahitana dia aseho amin'ny fanontana sary avy amin'ny sarimihetsika na ny takelaka taorian'ny namolavola azy. Isaky ny olona iray na zavatra tsaroana dia fanontana vaovao no atao, ka mila lazaina. Raha tsy manana fahatsiarovana mazava ny olona dia satria eo aminy izay fahitana, ny fisehoan'ny fahitana, dia tsy misy loko ary tsy voavoatra. Raha novolavolaina sy nampiofanina ny fahitana ny olona iray, dia mety hamerina ny toe-javatra na zavatra rehetra izay nahasarika azy ny fahitana sy ny maha-izy azy tamin'ny fotoana nahitana azy.
Ny pirinty sary na dia ny loko aza, mety ho kopaka maloto na sary fahatsiarovana ny fahitana rehefa voaofana tsara. Ny fanandramana kely dia mety handresy lahatra ny iray amin'ny fahatsiarovana azy ny fahitana na ny fahatsiarovana fahatsiarovana hafa izay mahatonga ny fahatsiarovana ny toetrany.
Avelao ny iray hanakimpy ny masony ary hivily ho amin'ny rindrina na ny latabatra izay misy zavatra maro. Ankehitriny, avelao izy hanokatra ny masony amin'ny ampahany segondra iray ary hanakatona azy, fa tamin'io fotoana io dia nanandrana ny hahita izay rehetra nihodinan'ny masony izy. Ny habetsaky ny zavatra hitany sy ny maha-izy azy ahitany azy ireo dia hanehoana fa tsy tanteraka ny fitadidiana azy. Ny fampiharana kely dia mampiseho hoe ahoana no ahafahany mivoatra ny fitadidiany. Mety hanome fotoana maharitra na fohy fohy izy, mba hahitana izay azony. Rehefa manantona ny masony eo ambonin'ny masony ny sasany amin'ireo zavatra hita tamin'ny masony maso dia ho hita maso miaraka amin'ny masony. Fa ireo zavatra ireo dia mihamangatsiaka ary farany dia hanjavona ary avy eo tsy afaka mahita ireo zavatra ireo ary tsara indrindra dia tsy misy fahatsiarovana ao an-tsainy ny zavatra hitany tamin'ny fahatsiarovany maso. Ny fanjavonan'ny sary noho ny tsy fahaizan'ny fahitana maso mihazona ny fahatsapana nentin'ilay zavatra. Miaraka amin'ny fampiasana an-tsary na fahatsiarovan-tsary mba hamerenana ireo zavatra efa vita amin'ny masony ankehitriny, na mba hamerenana ny fisehoana taloha na olona, ​​dia hivoatra ny fahatsiarovana sary, ary mety ho mafy orina sy hampiofana mba hamokarana fety mahafinaritra.
Ity tsipika fohifohy fohy momba ny fahitana ity dia hanehoana ny fahatsiarovana hafa sy ny fomba fiasan'izy ireo. Araka ny sary an-tsaina ny fitadidiana ny fahitana, ny feon-tsary dia mampiseho ny firaketana ny feo sy ny fanaterana ireo rakitsoratra ho fahatsiarovana feo. Ny dikan'ny feo dia miavaka amin'ny nerve-auditory sy ny arofan-tsofina satria ny fiheverana maso dia miavaka amin'ny nerve optic sy ny apparatus maso.
Ny fifandirana mekanika dia azo alika hampiasana ny tsirony sy ny fofona ary ny fahatsapana mampihetsi-po satria ny fakantsary sy ny feon-tsary dia mifanipaka, na dia tsy mahalala mihitsy aza ny momba ireo taova olombelona mifandraika amin'ny fahitana sy ny sain'ny feo.
Ny fahatsiarovana ny fahatsapana ara-moraly sy ny fahatsiarovana ny «I» dia fahatsiarovan-tsaina roa samy hafa, ary noho ny fahatongavan-tsaina tsy manam-petra izay mampiasa ny toetra. Amin'ny fahatsapana ara-moraly dia mianatra ny lalàn'ny fiainany ny toetra ary mamerina izany ho fahatsiarovana ara-pitondrantena izay misy ny fanontaniana momba ny tsara sy ny ratsy. Ny fahatsiarovana ny "I" dia ahafahan'ny olona manondro ny tenany manokana amin'ny toe-javatra na ny fisehoan-javatra niainany. Amin'izao fotoana izao, ny saina tonga nofo dia tsy manana fahatsiarovana afa-tsy ny fahatsiarovana ny maha-olona, ​​ary ny fahatsiarovana an'izany dia tsy misy afa-tsy ireo ihany no nomena anarana sy nanangana ny maha-olona iray manontolo, izay voafetra amin'izay azo jerena na re, na maimbo, na nanandrana, na nikasika, ary izay mahatsiaro ho marina na diso toa ny fihevitra azy manokana ho fisarahana misaraka.
In ny Teny tamin'ny Desambra dia hovaliana ny fanontaniana hoe: "Inona no mahatonga ny fahatsiarovana anao," ary "Izay mahatonga ny olona manadino ny anarany na any amin'ny misy azy, na dia mety tsy ho voan'ny hafa aza ny fahatsiarovana azy."